Uhlanga lwabe Sotho libonwa njengelona qela likhulu. Olu hlanga lohlulwa hlulwe ngeentlanga ezintathu: AbeSotho (AbeSotho base Mazantsi), Pedi (AbeSotho baseMntla), kunye naba Tswana (AbeSotho base Ntshona).
Uhlanga lwa Basotho lwalukande luhlala kwingingqi ye Highveld, kodwa ukusukela embindini weminyaka yoo 1800, luyanyaniswa kakhulu nobukumkani obuzimeleyo buka Moshoeshoe's base Lesotho (nobabukade bubizwa nge Basutoland).
Eli lizwe namhlanje liphakathi kwemida yoMzantsi Afrika.
Amasiko aBasotho Olwaluko
Ngaphambi kokuba abefundisi beemishini baze nezikolo, amakhwenkwe ayefundiswa xa esiya kwaluka. Eli siko laliphawula ukukhula ukusuka ebuntwaneni ukuya ebuntwini omdala....more
Uhlanga LwaBasotho Base Mzantsi Afrika
Abemmi bokuqala belizwe elibizwa nge Lesotho namhlanje, kukholeleka ukuba yayinga Bathwa (San), nabathi bashiya inkcubeko ngemizobo esemadongeni emiqolomba....more
Iinkolelo zaBasotho mayelana nokufa nobomi emva kokufa kuchatshazelwe kakhulu kukunwenwa kwegospile yobuKrestu. Ngaphezu koko, iinkolelo nezithethe zohlanga lwa Basotho ziye zitshintsha ngokuhamba kwamaxesha....more
Kumaxesha amandulo ubomi bemihla ngemihla bohlanga lwa Basotho babulandela uhlelo olunye. Indlela ekwakusabelwana ngayo ngemisebenzi yayixhomekeka kwiminyaka kunye nesini....more
Ubomi Bale Mihla Bohlanga LwaBasotho
Baninzi abemi base Lesotho aba ngabasebenzi base migodini yase Mzantsi Afrika. Kuba unintshi lwabo lufumana imali ngokusebenza emigodini, oku kuchaphazela indlela abenza ngayo izinto....more
Izithethe kunye Namasiko AbeSotho
Abesotho bazonwabisa ngengoma nangomxhentso, kwimicimbi neziyunguma zabo. Ingoma isetyenziswa ukuvakalisa ukudakumbiswa kokumka kwamadoda aye kusebenza ezidolophini ezikude namakhaya...more
Yayi yinto eqhelekileyo ukuba abantwana beenkosi kunye nabee nkokheli zaBasotho bakhethelwe ngabazali babo abalingane abaza kutshata nabo. Ubuhlobo ngoo khokho okanye ngezikhundla babu balulekile ukuze kuqiniswe imo yentlalo nemithetho esekiweyo....more
Uhlanga lwa Basotho baka Moshoeshoe lwalukade lumanyene ngokwezithethe kunye nangeze politiki. Kodwa ke, iyantlukwano ngokweziduko kunye nokuzalana yayibonakala kwilixa lokwakhiwa kwesi sizwe kwaye isaqhubeka nanamhlanje....more